Inona no mahatonga ny mpandinika tsara? | Martech Zone
Talata, May 5, 2009 Alahady 3 aprily 2016 Douglas Karr
Ao amin'ny Vovonana eMetrics Marketing Optimization Summit, nanana resadresaka mahaliana momba izay mahatonga mpandalina data angona be izahay. Miaraka amin'ny efitrano feno mpandalina ao amin'ny efitrano, fanontaniana tsara izany. Amin'ny ankapobeny, ny ekipa niara-niasa tamiko dia nanaiky fa misy mpandinika orinasa sy mpandinika angon-drakitra - ary samy hafa kely ny andrasana amin'ny tsirairay.
Ireo mpandinika raharaham-barotra dia manome fampahalalana amin'ny endrika mamela ny fanapahan-kevitra horaisina amin'ny tanjona kendren'ny orinasa. Ny mpandinika data dia manome ny angon-drakitra fotsiny. Ny roa dia tokony haneho am-pahalalana ny angon-drakitra amin'ny fomba izay ampifanarahana amin'ny mpihaino azy ary ny mpihaino dia afaka mamorona fehin-kevitra amin'ny fisafotofotoana kely indrindra azo atao.
Nisy ny marimaritra iraisana fa ny fahefan'ny fitaoman'ny mpandalina dia singa iray lehibe. Chris Worland an'ny Microsoft asio mpandalina anaty siny malina 3 - ny mpanafika kaomandy, ny hery miasa mangina, ary ny fanapahan-kevitra azo itokisana. Ny kolontsain'ny fikambanana sy ny rafitr'izy ireo dia hamaritra ny lanjan'ny fitaoman'ny mpandalina anao.
Andrew Janis nandraho azy tamin'ny fahaizan'ny mpandalina iray hampisaraka ny angona mahaliana sy azo ampiharina. Nifanaraka ny rehetra fa ny toetra amam-panahin'ireo mpandinika angon-drakitra mahomby dia ny fahaizana manangona ny tontolon-kevitra sy ny manodidina ny angon-drakitra ary manamboatra azy io amin'ny mpihaino, mahatakatra ny orinasa sy ny indostria ary ho tompon'ny sary.
Tsy isalasalana fa ny orinasa lehibe iray dia afaka mahomby na tsy mahomby mifototra amin'ny fahaiza-manao sy ny fitaoman'ny Analista. Ho an'ireo orinasa tsy dia lehibe dia matetika manao satroka samihafa ny mpiasanao - samy manana olona mandinika data sy manome valiny ny tsirairay. Ny fisafidianana mpandinika tsara (na mpiasa mamakafaka) dia manakiana ny fahombiazan'ny orinasanao. Safidio tsara.
Outliers: Ny tantaran'ny fahombiazana